Amin'ny fiarovana ny vatana ho salama
"Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anie hianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany." - 3 Jao. 2.
Ny fampiasan'ny olona iray ny tenany araka ny tokony ho izy no lesona sarobidy indrindra azo ianarana. Tsy hoe natao hampiasa ny saintsika isika, dia izay ihany, na hanao fampiasam-batana be, dia izay ihany. Natao hampiasa amin'ny fomba mahomby indrindra ireo ampahany isan-karazany mandrafitra ny vatan'olombelona isika : ny atidoha, ny taolana, ny hozatra, ny loha ary ny fo. — Y1, 31 Martsa 1898.
Tafiditra ao anatin'ny fampiasan'ny olona iray ny tenany araka ny tokony ho izy ny adidiny mikasika izany tenany izany sy amin'izao tontolo izao ary amin'Andriamanitra. Noho izany dia aoka hampifandanjaina tsara ny fampiasana ny herim-batana sy ny herin-tsaina. Ny antony manosika ny olona hanao ny asa iray no mamaritra ny toetr'izany asa izany. Raha tsy ambony sy madio ary tsy misy fitiavan-tena ny risi-po nentina nanao izany, dia tsy hifandanja tsara na oviana na oviana ny saina sy ny toetra (...)
An'ny Tompo ianao satria Izy no nahary anao. Azy ianao tamin'ny alalan'ny fanavotana, satria efa nanolotra ny ainy ho anao Izy (...) Arovy avokoa ny momba ny tenanao rehetra mba hahazoanao mampiasa izany ho an'Andriamanitra. Tehirizo ho Azy izany. Ny fahasalamanao dia miankina amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy ireo taova rehetra ao amin'ny vatanao. Aza ampiasaina amin'ny tsy antony ireo hery nomen'Andriamanitra ny vatanao sy ny sainao ary ny fanahinao. Ny fahazaranao dia tokony ho eo ambany fifehezan'ny sainao, izay Andriamanitra no mifehy azy.
Raha irin'ny zatovolahy sy zatovovavy ny hitombo amin'ny fanatrarana ny ohatry ny fahalehibiazan'i Kristy Jesôsy, dia tsy maintsy mikajy ny fahasalaman'ny vatany amim-pahendrena izy (...) Ny fahazaran-dratsy tsy mahasalama rehetra, toy ny fiaretan-tory, ny fatoriana maraina, ny fisakafoana mirotoroto, dia tsy maintsy resena. Tsakoy tsara avokoa ny sakafonao. Aoka tsy hirotoroto eo am-pisakafoana. Asio rivotra tsara ny efitrano amin'ny antoandro sy amin'ny alina ary ampiasao amin'ny asa mahasoa ny vatana (...) Amin'ny fampiasantsika ny herintsika araka ny tokony ho izy sy araka izay azo atao ho amin'ny asa mahasoa indrindra, amin'ny fitandroana ny fahasalarnan'ny taova rehetra mba hahazoan'ny saina sy ny hozatra maro samy hafa hiasa amim-pirindrana tsara, amin'izany rehetra izany no hahazoantsika manao ny asa fanompoana sarobidy indrindra ho an'Andriamanitra. — YI, 07 Aprily 1898.